Home Office kasta wuxuu ubaahanyahay mid! | Martech Zone
Isniin, Disembar 4, 2006 Jimco, Oktoobar 24, 2014 Douglas Karr
Wax yar ka hor sanad ka hor (2005) Waxaan sameynayay xoogaa latashi dhanka ah waxaana ubaahanahay inaan helo qalab cusub oo guriga agtiisa ah si aan wax uga qabto. Waxaan soo iibsaday kombuyuutar cusub, router wireless netgear cusub ah iyo kaararka wireless-ka… maalgashiga ugu fiicana wuxuu ahaa LinkStation.
LinkStation wuxuu si toos ah ugu xiraa routerkeyga wireless-ka wuxuuna leeyahay 250Gb oo boos ah. Isku xirnaanta adeegsadaha ee 'LinkStation' runti waa mid fudud… Waxaan awooday inaan u sameeyo gaari wadid carruurteyda mid walba, kumbuyuutarkeyga, buugga muusikada dhexe, iyo keydka macmiilka. LinkStation sidoo kale waxay la timid fiilo USB ah si ay ula wadaagaan daabacad, softiweerka FTP, iyo xitaa softiweerka warfaafinta warbaahinta. Taasi waxay ii oggolaaneysaa inaan dhigto qoraalkayga meel ka fog kombuyuutarrada iyo meel ku habboon.
Muuqaalka aan ugu jeclahay, in kastoo, uu leeyahay meel aad u badan oo ka fog PC-yada iyo isha shabakadda. Markasta oo aan dhammeeyo mashruuc, halkaas ayaan ku nuqulli lahaa. Mar kasta oo aan soo dejiyo oo aan rakibo softiweer, halkaas ayaan ku soo guuriyay, iyo mar kasta oo aan doonayo inaan wax la wadaago kombiyuutarrada - waxaan si fudud ugu gudbinnaa feylasha qaybta ay wadaagaan. Maya 'faylasha saamiyada', ma jiro rakibis saxanno, wax dhibaato ah haba yaraatee.
Qiyaastii 7 bilood ka hor, kombuyuutarkaygu wuxuu gabi ahaanba kor u qaaday cusbooneysiinta Norton Antivirus ee baabi'isay qaybta bootka. Waxay ahayd inaan dib-u-habeyn ku sameeyo darawalka oo aan wax walba kasoo bilaabo xoqida. Waxay noqon laheyd riyo qaali ah marka laga reebo inaan haysto wax kasta ku raran yihiin wadayaasha shabakadda. Waxaan soo laabtay maalin ama wax la mid ah kamana maqnaan wax garaacis ah.
Sannad iyo badh ka dib oo hadda mid ka mid ah macaamiishaydu wuxuu i weydiistay inaan ku sameeyo xoogaa falanqeyn isaga ah. Waxay ahayd muddo aad u dheer oo aanan xitaa haysan codsiyada mar dambe la raro. Toddobaadkii hore dhammaadkiisii, waxaan ku booday qaybta oo dib ayaan u soo rogay codsiyada. Toddobaadkan dhammaadkiisa, waxaan soo dejiyey falanqeyntii hore waxaanan awood u yeeshay inaan ka baxo falanqaynta galabta. Dib-u-barashada naftayda dalabku wuxuu ahaa qaybtii ugu adkayd!
Marka - waa kuwan talooyin ku saabsan xirfadlayaal iyo hiwaayad isku mid ah oo shaqo badan ka qabta kombuyuutarkooda:
Maalgeli qalab kaydinta shabakadda.
Adeegso qalabka kaydinta shabakadda. Fursad kasta oo aad hesho, nuqul ka samee shaqada aad ku qabanayso.
Nuqul rakibida softiweerka, cusbooneysiinta, cusbooneysiinta darawalnimada, iyo xitaa nambarada taxan ee qeybta. Tani waxay wax walba si ammaan ah u dhigaysaa laba meelood.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan keydinta shabakada ayaa ah in aysan jirin wax dib u celin ah iyo soo celinta waqtiga lagama maarmaanka u ah… kaliya nuqul faylasha gawaadhida, si dhakhso leh sidan. (Waxaan hayaa keyd kasta oo kumbuyuutarradayda ah).
Oo haddii aad la yaaban tahay, Mac wuxuu u arkaa wax walba oo fiican sidoo kale! Xitaa daabacaha la wadaago!
Tags: gurmadxiritaankaqalabka keydinta
10 Xeerarka Kulamada mudan
4, 2006 at 9: 32 PM
Aniguba sidoo kale taageere weyn ayaan u ahay aaladda LinkStation. Aniga qudhaydu waxaan hayaa nooca loo yaqaan '160GB version' oo way sii xoogaysanaysay ku dhowaad 2 sano hadda. Waxa ugu fiican ayaa ah iyada oo ay ugu wacan tahay nooca qalabka, ma jiraan wax dayactir ah ama daryeel iyo quudin ah oo loo baahan yahay.
4, 2006 at 10: 49 PM
Ka dib markii aan iibsaday tayda, saaxiibkey ayaa iibsaday nooca 1Tb. Waan maseyray! Isaguna wuu jecel yahay. Waxaan xiiseynayaa sababta uusan qof weli u dhisin mishiinka daabacadda / harddrive / wireless.